Isweydaarsiga Bounce: Waa maxay ujeedka looga baxo? | Martech Zone
Jimco, Febraayo 7, 2014 Arbacada, February 24, 2016 Douglas Karr
Waxaa laga yaabaa inaad ku ogaatay booggeena in haddii jiirkaagu uu ka dhaqaaqo bogga una soo jeesto cinwaanka cinwaanka (adiguna aadan qornayn), in guddiga rukunka uu muuqdo. Waxay u shaqeysaa si cajiib ah… waxaanan kordhinay dadaalkeena ku saabsan helitaanka macaamiisha min daraasiin ilaa boqolaal bil kasta. Tan waxaa loo yaqaan ujeedada bixitaanka.
Kala Beddelka Lacagta wuxuu leeyahay shati Ka bixid-Intent teknolojiyada ilaalisa dhaqdhaqaaqa jiirka, xawaaraha jiirka, meesha jiirka, iyo hadii ay jabineyso diyaarada biraawsarka si loo saadaaliyo in ujeedadaadu tahay inaad ka baxdo bogga iyo inkale.
Kahor inta uusan isticmaaluhu awoodin inuu ka tago goobta, muraayad ayaa u muuqata inay soo jiidaneyso oo ay sii haysato booqdaha. Taasi waa ujeedka ka bixitaanku waana waxtar wax ku ool ah!
Tags: baxsidiyaarad biraawsarkabixitaankaka beddeliddaujeedada bixitaankatilmaamaha jiirkaxawaaraha jiirka
Febraayo 21, 2014 saacadu markay tahay 9: 09 AM
Waxaan la yaabanahay sida ay u shatiyeen wax jira ugu yaraan laga soo bilaabo 2008 (waxaa la aasaasay 2010). Tani waa laga bilaabo Sebtember 18, 2008: http://www.warriorforum.com/main-internet-marketing-discussion-forum/13369-how-do-you-make-unblockable-exit-popup.html - laga soo bilaabo boostada ku saabsan soo-baxayaasha ujeeddada ka bixitaanka: “… Waxa kuugu dhow ee aad heli kartaa waa halka ay tilmaamee jiirkaaga booqdaha ahi uu u socdo meel u dhow shaashadda dusheeda… markaa waxaad u malaynaysaa inay riixayaan badhanka dhow. Kani waa soo bixitaankeyga ka bixida aan la furi karin: Waxqabadka PopUp: Feejignaanta-Qabashada PopUps-ka La-Furi Karo Markay Martidaadu Ka Baxaan Bogga… ”.
Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira qayb ka mid ah koodhkan laga bilaabo Abriil 27, 2012 oo fuliya tiknoolajiyada 'ka bixitaanka-u-jeedka' illaa 5 sadar oo koodh ah, oo loo heli karo dadweynaha: http://stackoverflow.com/questions/10357744/how-can-i-detect-a-mouse-leaving-a-page-by-moving-up-to-the-address-bar
Waxay xareynayaan taariikhda shatigooda waa Oktoobar 25, 2012. Taariikhda mudnaanta sida ku cad Google waa Apr 30, 2012 (http://www.google.com/patents/US20130290117)
Tixraac kale oo ka socda dhakhso: http://www.quicksprout.com/forum/topic/bounce-exchange-alternative/ boostada: “Sannadkii 2010 ScreenPopper.com waxaa laga abuuray dhabarka gaari yar-yar oo safar dheer oo 1.5 sano ah ku socday waddanka oo dhan maxaa yeelay ma aanan helin wixii aan u baahnaa. Ma jirin wax tartan ah, waqtigaas waxa kaliya ee la bixinaayay waxay ahayd xukunka dadwaynaha oo aad u adkaa oo ay adagtahay in la rakibo ”. Tani waa 2 sano ka hor inta aan 'patent' la xereyn.
Si loo soo gabagabeeyo Isweydaarsiga Bounce waxaa laga yaabaa inuu leeyahay badeecad aad u wanaagsan laakiin iyagu ma aysan ikhtiraacin mana laha wax xuquuq ah “tiknoolajiyadda” Waxaan la yaabanahay sida qareenkooda patent-ka ahi u heli waayey wixii aan ka heli lahaa ilaa 5 daqiiqo aniga iyo Google. Aniguna qareen ma ihi. Kaliya qof aan jeclayn wuxuu isku dayaa inuu keligiis maamulo wixii aan iyagu lahayn. Waxay ku qaataan $ 3000- $ 5000 iyada oo aysan doonaynin xal kale oo jaban oo jira (maxaad kale oo aad ugu baahan tahay "patent"?)
Febraayo 21, 2014 saacadu markay tahay 11: 55 AM
Anigu ma aanan aqrin rukhsadda dhabta ah laakiin waxaan dhihi lahaa in shatigu uusan macnaheedu ahayn inaad hindisay wax. Waxaad hagaajin kartaa istiraatiijiyad iyo patent-ka hagaajintaas.
Feb 21, 2014 markay ahayd 12:46 PM
Nabadeey @douglaskarr: disqus - Waxaan aqriyay labada sadar ee 1aad ee shatiga iyo astaantooda (iskuxirka kore) iyo sheegashada ugu weyn ee patentku waa teknolojiyadda 'bixitaanka-ujeedka'. Waxay ku andacoodaan inay alifeen raadinta jiirka ujeedkan. Xidhiidhada aan keenay waxay muujinayaan inaysan iyagu allifanin. Taasi waa waxa qaldan fikirkeyga. Waana iga careysiisaa maxaa yeelay waxaan ka fekerayaa inaan sameeyo qoraal ujeedka ka bixitaanka aniga lafteyda, ama aan isticmaalo mid ka mid ah kuwa badan ee beddelka loo diyaariyey (Waxaan arkay ugu yaraan 15 beddel…). Haddii Bounce Exchange rukhsaddiisa ay u adeegsan doonaan inay xayiraan, si aan sax ahayn, tartanka runti wuu dhaawici karaa dhammaan websaydhada hadda jira ee adeegsada beddelaado kale oo jaban; iyo dadka aniga oo kale ah oo adeegsanaya. Hadda markaan arkay qoraalkaaga waxaan hayaa fikrado 2aad. Fursad ma lihi waxaan ku bixin doonaa kumanaan doolar bishii arrintaas. Xitaa haddii aysan u qalmin rukhsadda, waxay wali igu abuuri karaan dhibaato badan haddii aan aniga naftayda sameeyo, ama aan kuwa kale isticmaalo.
Muddooyinkan dambe waxaan ku arkaa popup-yada noocaas ah meel kasta. Haddii aan la helin popup-ka ujeedka waxaan u baahan lahayn inaan dib ugu laabanno dad badan oo xanaaq badan - pop-unders, pop-overs waqtigeeda, soo-gelitaanka, iwm
Nov 26, 2015 saacadu markay tahay 3:31 PM
Marka, waxay u muuqataa in Retyp, dadka ka dambeeya Optin Monster ay dacweeyeen Bounce Exchange wax ka badan shatigan. Laakiin aqoon uma lihi waxyaabaha sharciga ku saabsan si aan u fahmo haddii la xalliyey, haddii ay sidaas tahayna, maxaa natiijadeedu ahayd…? Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xiriiriyeyaashan:
Waa hubaal inay fiicnaan lahayd in la ogaado waxa halkan ka socda. Waxay umuuqataa patent aad u doqon ah runtiina waxaan jeclaan lahaa inaan arko tan meel kale laga heli karo….
Nov 27, 2015 saacadu markay tahay 4:42 PM
Taasi waa qurux qurux badan Teyva. Waan ku raacsanahay suit wacky suit.
Jun 30, 2016 saacadu markay ahayd 5:46 AM
Badeecada ama adeegga ay BounceX iibiso (iyo BounceX / Yieldify ayaa ah adeeg buuxa inta ay yihiin wax soo saar) inta badan waxay leeyihiin waxyaabo badan. Badanaa macquul maahan in la sharciyeeyo geedi socodka oo dhan, markaa waxaad badiyaa ilaalisaa xudunta (kiiskan algo) maxaa yeelay waa qeybta ugu muhiimsan. Waan hubaa inay jiraan wax patent ah oo halkaas ka jira oo sawir abuuraya, isla markaana sawir ku soo bandhigaya degel iwm oo aysan iyagu lahayn oo ay farsamo ahaan ku xadgudbayaan.
Waxaa xusid mudan in Yieldify (eedaysanaha kiiskaas) ka iibsaday rukhsad gaar ah dhinac saddexaad isla markaana ay hadda dacweynayaan BounceX. Haddii aad haysato lacag aad ku daba gasho tartame markaa khatar yar ayaa jirta - haddii aad lumiso kiiska waxaad ku jirtaa booska aad hadda joogto (laga jaray lacagta) halka haddii aad guuleysato markaa waxaad goysay qaybta suuqa. naftaada la wadaag.